My iPhone ngwa agaghị emeghe! Nke a bụ azịza kasịnụ. - Ndị Ọzọ
kedu ihe itunes m agaghị amata iphone m
keyboard anaghị egosi na iphone
ekwentị m anaghịzi egwu vidiyo ọzọ
My iPhone ngwa agaghị emeghe! Nke a bụ azịza kasịnụ.
Mgbe ị pịrị iji mepee ngwa iPhone, otu n'ime ihe abụọ na - eme: ọ dịghị ihe na - eme, ma ọ bụ ngwa ahụ na - eburu ihuenyo mmeghe, mana mechie ozugbo. Kedu ụzọ ọ bụla, ị lere iPhone anya nke ngwa ndị na-emegheghị, nke ahụ adịghịkwa mma. N’isiokwu a, m ga-akọwara gị ihe mere iPhone ngwa gị agaghị emeghe Na esi edozi nsogbu ahụ .
Gịnị kpatara na ngwa iPhone m agaghị emeghe?
Gị iPhone ngwa ga-emeghe n'ihi na gị iPhone nwere a software nsogbu. Mgbe otu ngwa mkpọka, ọ na-emekarị anaghị akpata iPhone niile ugboelu. Kama, ị na-akwụsị azụ na ihuenyo ụlọ na ngwa ahụ na-ejedebe na ndabere. Ọtụtụ oge, nke ahụ zuru ezu iji dozie ahụhụ ngwanrọ, mana ọ bụghị mgbe niile.
Ngwa anaghị adị na agụụ. Na m ahụmahụ, Ngwa iPhone n'ozuzu agaghị emeghe n'ihi nsogbu na sistemụ arụmọrụ iPhone (iOS), ọ bụghị nsogbu na ngwa ahụ n'onwe ya.
Otu esi edozi ngwa iPhone nke emegheghi
Aga m ejegharị gị site na usoro ị na - eme nsogbu ngwa nke agaghị emeghe usoro ọ bụla. Anyị ga-ebido dị mfe ma rụọ ọrụ anyị n'ụzọ ga - eweta ihe mgbagwoju anya, oge ọ bụla achọrọ ha. I nwere ike ime ya. Ka anyị bido!
1. Tụgharịa gị iPhone anya na na ọzọ
Ọ dị mfe, mana ịgbanye iPhone gị na azụ nwere ike idozi nsogbu ngwanrọ zoro ezo nke nwere ike igbochi ngwa gị ịmeghe nke ọma. Mgbe ị gbanyụrụ iPhone, sistemụ arụmọrụ na-agbanyụ niile obere mmemme na-enyere gị iPhone ọsọ. Mgbe ị gbanyere ya, ha niile na-amalite, na mgbe ụfọdụ nke ahụ ezuru iji dozie nsogbu sọftụwia na-egbochi ngwa gị ịmeghe.
ahịrị nwere agba na ihuenyo iphone 6
Gbanyụọ iPhone gị, pịa ma jide ike bọtịnụ na gị iPhone ruo mgbe 'slide na ike anya' na-egosi na ihuenyo. Mia akara ngosi gafee ihuenyo ahụ na mkpịsị aka gị wee chere ka iPhone gbanyụọ. Ọ bụ nkịtị maka usoro iji ruo 30 sekọnd. Iji gbanwee iPhone gị, pịa ma jide bọtịnụ ike ruo mgbe akara Apple gosipụtara na ihuenyo ahụ wee hapụ ya.
2. Tulee mmelite na Storelọ Ahịa App
Otu n'ime isi ihe mere ndị mmepe ngwa ji ewepụta mmelite bụ idozi chinchi ngwanrọ nwere ike ibute nsogbu dịka nke a. Kama ịgafe ndepụta iji chọta ngwa nsogbu ahụ, echere m na nhọrọ kachasị mma bụ ịmegharị ngwa gị niile n'otu oge.
Iji melite ngwa gị, mepee Storelọ Ahịa na enweta na Akaụntụ Akaụntụ gị na elu aka nri nke ihuenyo. Pịgharịa gaa na ngalaba mmelite ahụ wee pịa Melite ihe niile imelite niile ngwa n'out oge.
3. Hichapụ ngwa ma degharịa ya
Echiche bụ na ị kwesịrị iwepu ngwa ahụ na iPhone gị wee budata ya ọzọ na Storelọ Ahịa App bụ ihe mbụ ọtụtụ ndị ọrụ ntanetị ga-agwa gị mee. Ọ bụ 'kwụpụ ya, kwunye ya azụ' n'ụlọ akwụkwọ echiche, ọtụtụ oge ọ na - arụ ọrụ.
esi dee akwụkwọ maka mbata na ọpụpụ
Echere m na ọ bụkwa ebe dị mma ịmalite, mana achọghị m ka ị bulie olile anya gị. Jụọ onwe gị, sị: 'Nsogbu a dị na ngwa m niile ka ọ bụ nsogbu na naanị otu ngwa?'
Eeh naanị otu nke ngwa gị agaghị emeghe, enwere ezigbo ohere na iwepu ngwa site na iPhone gị na ịtinye ya na Storelọ Ahịa ahụ ga-edozi nsogbu ahụ.
Eeh ọtụtụ nke ngwa gị agaghị emeghe, anaghị m akwado ka ihichapụ ma degharịa ha, n'ihi na ọ nwere ike ịbụ igbu oge. Kama, anyị ga-eleba anya na ihe kpatara ya, nke bụ sistemụ arụmọrụ iPhone (iOS).
4. Ngwa ahụ adịla ochie? Olee mgbe ikpeazụ ọ na-emelite?
Enwere ihe karịrị nde 1.5 na ngwa ngwa ahụ, ma ọ bụghị ha niile ka edobere oge. Koodu ngwanrọ nke na-eji ngwa iPhone arụ ọrụ na-agbanwe oge ọ bụla Apple wepụtara ụdị ọhụrụ nke iOS. Ọtụtụ mgbe mgbanwe ndị ahụ anaghị adị oke egwu, mana ọ bụrụ na emelitebeghị ngwa kemgbe ọtụtụ afọ, o yikarịrị ka ọ naghị adaba na ụdị iOS gị.
Ọ bụrụ na imelite iPhone gị na nso nso a nke iOS, ọkachasị ọ bụrụ na ọ bụ mmelite kachasị, dịka ịga na iOS 13 na iOS 14 (ọ bụghị site na 14.2 ruo 14.2.1, dịka ọmụmaatụ), nke a nwere ike ịkọwa ihe kpatara ngwa gị ji merie ' emeghe.
iphone 7 agaghị emekọrịta na iTunes
Iji chọpụta mgbe emelitere ikpeazụ, mepee ya Storelọ Ahịa gị iPhone. Chọta ngwa ahụ wee pịa Dekọọ nsụgharị iji hụ mgbe emelitere ụdị ngwa ahụ.
Wayzọ ọzọ iji nwalee nke a bụ ịjụ otu enyi nwere otu ụdị iPhone na iOS iji budata ma mepee ngwa ahụ. Ọ bụrụ na ngwa ahụ na-arụ ọrụ na iPhone gị, anyị maara na enwere nsogbu ngwanrọ na nke gị. Ọ bụrụ na ngwa ahụ agaghị emeghe na iPhone gị, enwere nsogbu na ngwa ahụ.
ngosi iphone 5 anaghị arụ ọrụ
O di nwute, ọ bụrụ na ngwa dị oke ochie iji gbaa ọsọ na ụdị ọhụrụ nke iOS, ọ nweghị ihe ị ga - eme iji mee ka ọ rụọ ọrụ. Bestzọ kachasị mma gị bụ ịkpọtụrụ onye nrụpụta ngwa ma jụọ ma ha na-eme atụmatụ ịhapụ ụdị emelitere. Ọ bụrụ na m nọ n'ọnọdụ gị (onye nrụpụta), m ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na mmadụ ga-eme ka m mara maka nsogbu a.
5. Tọgharia ntọala niile
Ga-ahụ Hola na Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia , ma ọ bụghị ihe m na-akwado ime ma ọ bụrụ na ọ dị oke mkpa. Tọgharị niile ntọala adịghị ichicha ọ bụla nke gị onwe onye data gị iPhone, ma dị ka aha ahụ na-egosi, ọ na-tọgharịa niile ntọala ụlọ ọrụ defaults. Ọ bụrụ na i werela oge ebuli ntọala iji melite ndụ batrị , dịka ọmụmaatụ, ị ga-eme ya ọzọ.
Echeghị m na enwere mgbatị anwansi maka nsogbu iPhone, mana ọ bụrụ na m ga-ahọrọ, Tọgharia Ntọala bụ ihe kacha dịrị ya. Ọ bara uru ịnwale: Ahụla m ka Ntọgharị Ntọala na-edozi nsogbu sọftụwia dị egwu, ọ bụghịkwa ihe mgbagwoju anya dị ka usoro ọzọ na usoro a, nke na-akwado ma weghachite iPhone gị.
6. Mee ndabere nke iPhone gị ma weghachite ya
Ọ bụrụ na ị gbalịrị ettọgharị ntọala iPhone gị, kpochapụrụ ma tinyegharịa ngwa ahụ, ma ị kwenyesiri ike na ngwa ahụ emechabeghị agba ọsọ na ụdị nke iOS gị, ọ bụ oge iji kụọ jackpot ahụ. Anyị na-aga ime ndabere nke iPhone gị na iCloud, ma ọ bụ Finder, iTunes, wee weghachite iPhone gị site na iji iTunes ma ọ bụ Finder, anyị ga-akwụsịkwa iweghachite data nkeonwe gị na ndabere gị.
Tupu akwado gị iPhone, M nwere ike ikwu na ị na iwepụ ngwa na-akpata nsogbu site na iPhone gị ( Eeh ọ bụ naanị ngwa nke agaghị emeghe). Ọ bụrụ na ọ karịrị otu ngwa, echegbula onwe gị maka iwepu ha niile, mee nkwado ma soro usoro a.
The ezigbo ụzọ ime nke a bụ nkwado ndabere na mpaghara gị iPhone na iCloud (ma ọ bụrụ na ị na-enweghị ohere, m isiokwu na gịnị mere na ị gaghị akwụ ụgwọ maka nchekwa iCloud ga - enyere gị aka ịhapụ ihe), eme a DFU weghachi gị iPhone iji iTunes ma ọ bụ Finder ma weghachite data gị na nkwado ndabere na mpaghara iCloud.
Jiri iCloud ka ndabere gị iPhone, ma ọ bụrụ na i nwere ike
M nwere ike ikwu iji iCloud nkwado ndabere na mpaghara weghachite iPhone mgbe ngwa gị agaghị emeghe.
Mgbe ị kwadoro iPhone gị na iTunes ma ọ bụ Finder, ị mepụtara otu ngwa na ngwa gị niile. Mgbe ị weghachi site na nkwado ndabere ahụ, faịlụ ahụ niile etinyeghachiri na iPhone gị, ma enwere ohere na nsogbu ahụ ga-apụta ọzọ.
ICloud backups naanị chekwaa data nkeonwe gị 'na igwe ojii', ọ bụghị ngwa niile. Mgbe ị weghachite site na nkwado ndabere nke iCloud, iPhone gị na-ebudata data nkeonwe gị na iCloud yana ngwa gị site na Storelọ Ahịa App, yabụ enwere obere ohere nke nsogbu ịlaghachi.
e jikọọ wifi iphone mana ọ naghị arụ ọrụ
Ngwa na-emeghe ọzọ! Na-emechi…
Mgbe ngwa iPhone agaghị emeghe, ọ bụ nsogbu nwere ike iwe 30 sekọnd, 30 nkeji, ma ọ bụ karịa iji dozie. Maka gị, enwere m olileanya na ihe ngwọta dị mfe. Ọ ga-amasị m ịnụ maka ahụmịhe gị na ngwa ndị na-agaghị emeghe, yana otu ị ga-esi edozi iPhone gị.
Daalụ maka ịgụ, ma cheta ịlaghachi ihu ọma,